Ampidino ny Spotify Premium APK maimaim-poana - VidaBytes | LifeBytes
Biraon'ny mpikatroka 2016
Sintomy ny Spotify Premium APK maimaim-poana
Ovao ny làlana fampidinana ny app SnapTube
Ahoana ny fanamboarana ny efijery pc-ko be loatra?
Ahoana ny fomba fanadiovana ny console Xbox One nefa tsy manimba azy
Ahoana ny fametrahana ny fandikan-teny Google amin'ny boaty ho an'ny fitaovana?
Networks ao amin'ny tambajotra | | fampiharana
Ho an'ireo izay te hanana fidirana amin'ny lisitry ny hira Spotify rehetra fa maimaim-poana, Hiresaka fomba vitsivitsy hampiatoana ny Spotify Premium APK maimaim-poana izahay. Tsy hanana fihoarana lehibe na tsy fitoviana lehibe ianao satria hanana ny fiasa rehetra omen'ny Spotify Premium.
Ny iray amin'ireo vahaolana voalohany atolotra dia ny fampidinana ny Spotify Beta, ity dia APK izay manome fiarovana na dia afaka malalaka tanteraka aza. Tsy mila manafoana habetsaky ny famokarana hira ianao, raha tsy te-hisintona azy ireo ianao satria tsy manana izany asa malalaka izany.
Amin'ny alàlan'ny fisintomana Spotify Apk dia hahazo ny lisitry ny hira nilalao sy nozaraina indrindra ianao, ary koa ireo hira farany indrindra, ary mampiasa radio mihitsy aza nefa tsy mandoa ny vidin'ny fampiharana. Ity ny fomba ahafahanao manao azy:
1 Ahoana ny fomba ahazoana Spotify Premium maimaim-poana?
2 Sintomy maimaim-poana ny Spotify Premium miaraka amin'ny fanovana ID finday
3 Sintomy ny Spotify Premium maimaimpoana amin'ny fampiasana fitsangantsanganana fitsapana maimaimpoana
Ahoana ny fomba ahazoana Spotify Premium maimaim-poana?
Spotify Beta dia kinova maimaim-poana mitovy amin'ny Spotify Premium, ary raha te-hisintona izany dia tsy maintsy ampidirinao ireo rohy ireo mba hahafahanao mametaka Spotify avy hatrany:
Ity APK Spotify ity aza dia mamela anao hanana tranomboky anao manokana, ahafahanao mandamina hira sy atiny, arakaraka ny iza no tianao indrindra, ary afaka mamorona playlist anao manokana koa ianao.
Izy io dia andiany iray an'ny apk Spotify Premium maimaim-poana nohavaozina tanteraka ka ho toy ny nisintona Spotify Premium 2019. Tokony ho tadidinao ihany koa fa ireo APK ireo dia tsy mamaha ny kaody fampidinana Spotify mba hahafahanao mitendry hira fotsiny amin'ny alàlan'ny fampiasana tokana ny fampiharana.
Sintomy maimaim-poana ny Spotify Premium miaraka amin'ny fanovana ID finday
Raha sanatria tsy ny safidinao taloha na tsy azonao sintomina dia azonao atao ny misafidy ny manova ny karatra finday hisintomana Spotify Premium maimaimpoana. Voalohany indrindra, tsy maintsy ampidirinao ny app Spotify hamoronana kaonty toa ny hampiasanao ny serivisy aloa, aorian'izay dia hanolotra anao izy io, amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ny kaonty, ny fahafinaretana amin'ny fotoana fampiasa fampiasa maimaim-poana, na rehefa manondro, vanim-potoana fitsapana ny fangatahana.
Na izany aza, tsy maintsy jerenao fa avy amin'io fotoana io ny rakitra dia mamonjy ny fahatsiarovanao ny findainao, noho izany dia mamorona kaonty vaovao ianao ary miaraka amin'io ID io ihany dia tsy afaka misafidy ny fitsapana maimaimpoana ny Spotify Premium ianao. Izany no antony anolorana hevitra anao isaky ny mifarana ny serivisinao maimaimpoana dia manova ny ID an'ny finday avo lenta ianao.
Ho an'ity dia tsy maintsy mpampiasa root an'ny telefaona Android ianao ary avy eo misintona fampiharana antsoina hoe Device ID Changer, azonao jerena mora foana ao amin'ny Google Play. Aorian'ny fisintomana ny fampiharana dia tsy maintsy miditra ianao ary kitiho ny bokotra izay manondro ny teny hoe "Random" ary amin'ity fomba ity dia hisafidy ID vaovao ho anao ny fampiharana.
Ny dingana manaraka hovitaina dia ny famerenana amin'ny laoniny ny findainao, sokafy indray ny Spotify Premium ary misoratra anarana mpampiasa vaovao, ho tsapanao fa tsy hotsarovana ny ID-nao ary hanolotra anao ny fitsarana maimaimpoana indray. Ity dia dingana somary mandreraka kokoa nefa mahomby ihany.
Sintomy ny Spotify Premium maimaimpoana amin'ny fampiasana fitsangantsanganana fitsapana maimaimpoana
Safidy iray hafa eo ambonin'ny latabatra hisintomana maimaimpoana ny Spotify dia amin'ny alàlan'ny fitaovana Free Trial Surfing. Izy io dia avy amin'ny application Do Not Pay ary mamela anao hamorona alias miaraka amina carte de crédit amin'ny lafiny rehetra sy maimaim-poana.
Raha vantany vao mahazo ny solonao sy ny karatra virtoalyo amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity ianao dia afaka mampiditra an'io data io ao amin'ny Spotify Premium ary hanana fotoana maimaim-poana Spotify ianao. Aza manahy ny amin'ny fanaovana heloka bevava, satria ny banky iraisam-pirenena dia manohana ny fivezivezena maimaimpoana.
Ny hany maharatsy an'ity safidy ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny iOS irery. Raha takiana amin'ireo mpampiasa Android dia tsy maintsy manatanteraka dingana hafa ianao amin'ny alàlan'ny "fidirana aloha" fa miditra amin'ny tranokala ofisialin'ny Do Not Pay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fampiharana » Sintomy ny Spotify Premium APK maimaim-poana
Karazana viriosy amin'ny solosaina manimba ny rafitra
Inona ny IMEI ary ahoana ny fomba hijerena azy mora foana?